Adaamaamagaalaa guddoo godina Shawaa Bahaati.
Asallaan naannoo oromiyya keesa kanaargamu magaala guddo godina Arsiiti.Asallaan magaala finfinne irra kilomeetira 175, magaala Adaamaa irra ammo kilomeetira 76 gama kibbaatiin argamaa.
Bishooftuun magaalaa naannoo Finfinneetti argamtu yoo taatu, bashannanaa fi turizimiin beekkamti.
Fiicheen magaalaa Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokko yoo taatu, magaalaa guddoo godina Shawaa Kaabaa ti.
addis ababa,አዲስ አበባ,Finfinnee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi biyyaa Itoophiyaati.
Harargeen kutaa bulchiinsa impaayera Itoophiyaa kan durii ti. Harargeen kan argamu baha Itoophiyaa keessatti yoo ta'u magaalaa guddoon kutaa bulchiinsa kanaa Harar turte.
Iluu Abbaaboor godina Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dha. Daangaan Iluu Abbaabooraa kibbaan Saba fi Sab-lammoota Ummattoota kibbaan, kibba-dhihaan mootummaa naannoo Gaambeellaa, dhihaan Baha Wallaggaa, kaaban mootummaa naannoo Benishangul-Gumuzii fi bahaan Jimman marfama. Aanoleen Iluu Abbaabooraa kessatti argaman Beddeellee, Goree fi Mattuu jedhamu.
Oromiyaan kutaalee biyti Itoophiyaa jedhamtu qabdu saglan keessaa tokkodha. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 600,000 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa tilmaamaan afurtamii shan (45) qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa Ityoophiyaa jedhamtu keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa durii Finfinnee yoo taatu, kan ammaa garuu Adaamaadha.
Wallagga kutaa bulchiinsa imapaayera Itoophiyaa kudha arfan keessaa tokko yoo taatu dhiha biyyatiitti argamti. Magaalaan guddoon kutaa bulchiinsa Wallaggaa Naqamtee dha.